Uhlinze ingane (5) yomfowabo - Ilanga News
Home Izindaba Uhlinze ingane (5) yomfowabo
Uhlinze ingane (5) yomfowabo
KUVUKE ukugula wanquma, wahlinza ingane yomfowabo ngoMsombuluko owesilisa (26) waseBhekuzulu, e-Estcourt, okubikwa ukuthi ukwenze lokhu isele nonina, uyise esaphumile eye esitolo.
UMnu Simphiwe Zwane (30), onguyise kaCelumusa Zwane (5) ohlinzwe wakhishwa amathumbu uthi usemxolele omfowabo, esingeke simdalule kuze kuba uyalivuma icala noma uyaliphika enka-ntolo.
Ekhuluma neLANGA uMnu Zwane, uthi ubuye esitolo sekugcwele iqulu labantu, ingane isishonile nomfowabo ekhona egcekeni.
“Ngithole ukuthi ungene endlini wathatha ummese, waqonda endlini yami wafica kukhona indodana yami. Ufike wayingenela ngommese eyinquma uqhoqhoqho, wayihlinza wayikhipha amathumbu waqeda ukwenza lokhu waqhubeka nokuzihlalela ekhaya sengathi akwenzekanga lutho,” kusho uMnu Zwane.
Uqhube wathi umfowabo wenza lokhu nje, ungumuntu okhubazekile ngokomqondo.
“Wenza le nto nje, besizitshela ukuthi useyalulama ekuguleni kwakhe njengoba kwamqala evele esekhulile. Ngifike ekhaya engazi nokuthi lidumephi. Kuthe noma ngimbuza ukuthi uyibulaleleni ingane, wathi ubengaqondile ukuyibulala, kwenzeke iphutha wabe esexolisa. Nginqume ukumxolela ngoba ngibonile ukuthi ukumbambela kwami igqubu ngeke kungisize ngalutho ngoba ngiyamazi ukuthi ugula ngengqondo,” kusho yena.
Uthi ibathusile into eyenziwe ngumfowabo ngoba akayena umuntu onodlame, selokhu wahlaselwa wukugula, ungumuntu ohlale ezithulele.
Ikhansela lendawo uMnu Simo Ndumo, lisiqinisekisile lesi sigameko, lathi lisazohlangana namalungu omndeni ukuyobhonga emswanini.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, usiqinisekisile lesi sigameko, wathi amaphoyisa abophe owesilisa osolwa ngokugwaza abulale ingane yomfowabo eneminyaka ewu-5.
Uthe umsolwa uvelile eNkantolo yeMantshi yase-Estcourt ngecala lokubulala.
Kulindeleke ukuba aphinde avele enkantolo maduze ukuyofaka isicelo sebheyili.
Previous articleinkombankombane ngodungunyane epulazini
Next articleUtholwe elenga usomatekisi